.: ကဲ ... ကဲ တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကောက်ကြောင်းလေးတွေ ကြည့်ကြစို့
ကဲ ... ကဲ တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကောက်ကြောင်းလေးတွေ ကြည့်ကြစို့
ရုပ်ရှင် အမျိုးသမီး ဘောလုံး အသင်း နှင့် Air Bagan လေယာဉ်မယ် ဘောလုံး အသင်း တို့ ချစ်ကြည်ရေး ဘောလုံးပွဲ ကစားမည်
၁၅ . ၆ . ၂၀၁၀
Copy from www.hanthawaddy.org
Posted by Always at 6/15/2010 07:25:00 PM
ပါတီတည်ထောင်၊ မှတ်ပုံတင်ပြီးမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်...
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ အခုလို ရှင်းလင်းသင့်သည်
မြန်မာတွေကလည်း အစိုးရကို တောင်းဆိုရမည့် အရာတွေကို ...
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေလည်း ကော့၊ လှန်၊ ခါ၊ ကား၊ ကုန်း...
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၌ စုပေါင်းငွေဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း...
ဤသို့မှန်ကန်စွာ တွေးခေါ်၊ရေးသား၊ ထောက်ပြခြင်းကို ကြ...
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာ ဤသို့ နာမည်ရလာပြီ
(၂၂)နှစ်ပြည့် ဇွန်(၂၁)အရေးအခင်း ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမ...
မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဒေါ်အောင...
လစ်လပ်နေသော " ခုံ " နေရာလေးပြည့်သွားအောင် ၀ိုင်းဝန...
လျှပ်တပြတ် ၃မိနစ်လေဆင်နှာမောင်း ရွာလုံးကျွတ်ပြိုပျ...
သူ့ကို မြန်မာစစ်သားများအတွက် ရိက္ခာအဖြစ် ထည့်ပေးသင်...
ကဲ ... ကဲ တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် ဒီတစ်ခါေ...
မိုးကြီးတော့ ရေကြီး၊ ရေကြီးတော့ မြေပြို၊ မြေပြိုတေ...
သင့်ကို မြန်မာ့ရေတပ်က အလိုရှိသည်
ဤသို့ဖြင့် မြန်မာပြည်သူများ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဝေးနြေ...
ကမာရွတ်စက်ရုံ ပေါက်ကွဲ၊ ၄ ဦးသေ
ကျမတို့လည်း “ဖာ” ဖြစ်ချင်လို့ သဘောတူလိုက်ပါသည်
မျိုးစပ်၊ မျိုးဖောက် တိရစ္ဆာန်တို့၏ စီးပွါးလုပ်ငန်း...